Inona avy ireo fomba mety hitrandrahana rindran-taratasy amin'ny herintaona?
Ny tsirairay izay miasa ao amin'ny tsena nomerika dia mahafantatra fa ny fananganana rohy dia manan-danja amin'ny fahombiazana rehefa manangona fahefana amin'ny vohikala ary mahazo ny laharana ambony ao SERP. Raha te-hanandratra avo kokoa ny SERP ianao, mila bakety kokoa. Ny hatsaranao sy ny votoatinao tanteraka dia tsy ho hitan'ny mpamaky anao raha tsy misy rohy. Noho izany, ny backlinks momba ny kalitao dia iray amin'ireo antony manan-danja indrindra amin'ny fikarohana ara-tsosialy ankehitriny. Ny lahatsoratra sy ny lahatsoratra avo lenta rehetra dia manana fifandraisana an-taonany avy amin'ireo loharano hafa izay manondro azy ireo. Ny rohy dia manapaka ho an'ny pejy izay heverin'i Google ho tompon'andraikitra. Google dia miarahaba ireo pejy misy rohy an'arivony izay azo raisina ho mendri-piderana kokoa noho ny pejy iray miaraka amin'ny backlinks folo. Na izany aza, raha avy amin'ny loharanom-baovao mendri-pitokisana azo antoka ireo rohy ireo, dia handoa onjam-peo an'arivony miorina amin'ny aterineto izy ireo.
Miaina ao anaty tontolo iray izay mila ny rindrankajy rehetra ny orinasa rehetra. Ny mpikaroka dia mitady azy ireo isan'andro, ary lasa sarotra ny mijanona eo an-tampon'ity lalao ity. Tantsaha maro no nanajanona fotsiny ny fanentanana fananganana rohy raha mahita fa manelingelina, tsy misy dikany ary tsy manaja. Na izany aza, dia tsy lany ny mamoy. Mba hampitomboana ny fifamoivoizana organika dia mila mamorona profiles momba ny backlink. Noho izany, ny fahazoana lamandy amin'ny 2017, 2018 ary ny taona manaraka dia ho laharam-pahamehana. Misy fomba tsy azo ovaina izay azonao ampiasaina amin'ny fanentanana fananganana rohy mba hahazoana vokatra hita maso. Amin'ity lahatsoratra ity, dia hijery akaiky ireo teknika ireo isika ka hampiasa toro-hevitra amin'ny fanentanana ankapobeny izay mbola miasa mandritra ny 2018.
Ahoana ny fomba hiverenana backlinks amin'ny 2018?
Ny blaogy gitara dia fomba tsara indrindra ahafahanao mitondra fiara vaovao sy vondron'olona mankany amin'ny tranokalanao. Zava-dehibe sy lamaody manokana hanamboarana sira mifandraika tsara. Ankoatra izany, dia manome fahafahana anao hametraka ny tenanao ho toy ny manam-pahaizana momba ny indostria ary maneho ny mpampiasa ny fahefanao.
Ny fomba tsara indrindra ahafahana mametraka lalam-baolina anatiny dia ny mamorona bilaogy ho an'ny tranokalanao. Na dia izany aza, ny famoahana ny tranokalan'ny vahiny izay manana fahefana ambony sy laza malaza eo amin'ny mpiserasera dia misintona ny fifamoivoizana izay tsy azonao hidirana. Isaky ny lahatsoratra isan-tokantrano iray, mila mampiasa alim-pandihizana an-tserasera ianao izay mifandray amin'ny tranokalanao. Hanampy anao ho fampiroboroboana maimaim-poana izany ary hanatsara ny fahefanao. Manoratra lahatsoratra miorina amin'ny fikarohana ianao ary toy ny fifanakalozana amin'ny asa ataonao dia mahazo lohamilina sarobidy. Toa marina ny zava-drehetra, sa tsy izany? Noho izany, ny tanjon'ny tanjona voalohany dia ny lahatsoratra tokana voaray amin'ny tranonkala avo lenta sy avo lenta. Manoro hevitra anao aho fa tsy mandany mamorona lahatsoratra ho an'ny tranonkala spammy malemy.
Fanamarinana ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny pejinao
Azoko antoka kokoa fa misy lahatsoratra mifandraika amin'ny Manam-pahefana ambony indrindra sy ireo mpilalao ikoizanao. Miantso sy mampiditra mpampiasa azy ireo izy ireo. Ireo lahatsoratra toy izao dia nahazo ny lanjany tao anatin'ny fotoana fohy rehefa mahita izy ireo ary ahitana fampahalalana mifototra amin'ny fikarohana. Ireo izay mamoaka lahatsoratra toy izany dia manao izany noho ny antony manokana. Tiany ny hahazo famerenana bebe kokoa amin'ny alalan'ireo lahatsoratra ireo. Noho izany, raha mitanisa vahoaka malaza ianao ao amin'ny lahatsoratra, dia mety ho azonao kokoa ny rohy voatokana ho an'ny tranokalanao. Ankoatra izany, dia mety hizara ireo lahatsoratra miaraka amin'ireo mpanara-dia azy ireo ny fitaoman-tsoavaly nosoratanao Source .